Mwakpo Yobe: 'Anyị amaghị ebe ụmụ anyị nọ' - BBC News Ìgbò
Mwakpo Yobe: 'Anyị amaghị ebe ụmụ anyị nọ'
22 Febrụwarị 2018
Nkenke aha onyonyo Ihe ruru ụmụakwụkwọ GGSTC iri itoolu bụ ndị a na-achọ achọ kemgbe ụbọchị iri na itoolu ọnwa Febrụwarị mgbe ndị a na-eche na ha bụ ndị Boko Haram wakporo ha
Mmadụ ise n'ime ha tụbọrọ ozigbọ ha nụrụ n'ọnụ Gọvanọ steeti ahụ bụ Ibrahim Gaidam na ụmụ ha na-efu efu na amaghị ebe ha nọ, ebe ụfọdụ gosiri iwe ha.
Ụfọdụ ndị nne na nna nọ ebe ihe a mere gwara BBC na ha hụrụ ka a na-atụ Gọvanọ Gaidam na ndị so ya okwute ka ha bịachara ịhụ ezinaụlọ ndị ọdachi a metụtara.
Malami Jumai Abubakar nke ụmụ ya atọ na-agụ na Government Girls Science Technical College (GGSTC), Dapchi, dị na Yobe Steeti tụrụ arịrị na ya ahụbeghi ụmụ ya abụọ kamgbe ụbọchị Monde 19 ọnwa Febụrụwarị oge ndị a e chere na ha bụ ndị Boko Haram wakporo ụlọakwụkwọ ahụ.
"Mụ na ụmụaka m kparịtara ụka n'ekwenti onye nkuzi ha n'ebe elekere abụọ nke ehihie. Mana ọ bụ oge e kpechara ekpere mgbede ka anyị nụrụ maka mwakpo mere n'ụlọ akwụkwọ ha.
"Anyi gara n'ụlọakwụkwọ ha ụbọchị Tuuzde, ndị gọọmenti gwara anyị na onweghị ihe mere ụmụakwụkwọ, na onweghị onye na-efu efụ, ma rue ugbua Tọzdee, ahụbeghị ụmụ m abụọ."
Kundiri Alhaji Bukar kwuru: ''Anyị na-eche ozi n'aka Gọvanọ mana mgbe ọ kpọkọbara anyị, nne na nna ụmụakwụkwọ na-efu efụ, ọ gwara anyị ihe mere ka obi dị anyị njọ karịa ka ọ dị mgbe anyị nwetara ozi banyere mwakpo ahụ. Ogwara anyị na ezigara ndị agha mana onye isi ha gwara ya na ha ahụghị ụmuaka ụmụnwaanyị ahụ n'aka ndị Boko Haram. O kwuru na onweghi onye o doro anya na ọ bụ Boko Haram tọrọ ha.
"Mana anyị kwenyere na ọ bụ Boko Haram. N'aha Chineke, ọ bụ Boko Haram kpụrụ ha. Ihe Govanọ kwuru wutere anyị. Mmadụ ise tụbọrọ mgbe ha nụrụ ihe gọvanọ kwuru, e buru ha gawa ụlọọgwụ. Anyị bụ ndị obioma. Gịnị mere ha ji eme anyị etu a? Ha gwa anyị ezị okwu ihe mere ụmụanyị."
Etu ị ha ekwesighi ịbụrụ gị ọdachị
Ndị agha agbapụtala ụmụakwụkwọ Boko-Haram tọrọ
Ụmụakwụkwọ 50 efuola na mwakpo Yobe steeti
Ndị oji aka egbuji igwe nọ na Nnewi
Onye ọzọ achọghị ka a kpọ aha ya kwuru: "N'abalị ụnyaahụ, ozi anyị nwetara bụ na azọpụtala ụmụaka ụmụnwaanyị. Obi anyi rituru, anyi na-ekele ndị ọchị agha maka na gbalịrị. Anyị chere na ha ga akpọnye anyị ụmụ anyị taa. Mana Govanọ gara n'ụlọ onyeisi obodo ebe ndị nne na nna ndị ụmụaka ha na-efu efu gbakọrọ. Ihe gọvanọ kwuru bụ ka anyị nwe ndidi ma dere juu, na o webeghị anya ebe ụmụ anyị nọ. Okwu ahụ were ndị mmadụ iwe. Ọtụtụ bere akwa, ụfọdụ tụbọrọ, ebe ụfọdụ tụrụ ụgbọala gọvanọ na ndị so ya okwute. Ihe dịka ụgbọala iri na ise bụ ihe e mebiri."
Cheta na n'abalị ụnyaahụ, ọnụ na-ekwuchitere Yobe steeti bụ Abdullahi Bego kwuru n'akwụkwọ ozi o wepụtara na ndị agha Naijiria azọpụtala ụmụakwụkwọ n'aka ndị oyiegwu tọrọ ha ma o kwughị ọnụọgụgụ ha.
Etu ị ga-eji gbanarị iri nsị nri
Mgbe emume Ọja bulitere Enugwu
Ụlọikpe mkpegharị emeela Dariye ihe obi aṅụrị